မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 32
(11) Clauses: Short Forms (B)
B. Short forms for questions 1. နောက်ထပ်သိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် မကြာခဏ မေးခွန်းတိုလေးတွေ မေးလေ့ရှိတယ်။ A: I’ll see you on Monday. B: What time? A: We are going on holiday next week. B: Where? A: You can getanew computer very cheaply. B: How? ပို၍ ယဉ်ကျေးစေချင်လျှင် မေးခွန်းရှည်နဲ့ မေးနိုင်တယ်။ A: I’m going to London on Monday. B: What time are you going? A: We […]
ဂျပန် tsunami ငလျင်သတင်းအကျဉ်း
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များက လူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို အပျက်အစီးကြားမှ ဆွဲထုတ်ကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်း၊ Japan’s national police agency မှ တရားဝင်သတင်းအရ လူပေါင်း ၇၆၃ ယောက်သေပျောက်ပြီး ၆၃၉ ယောက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၊ ၁၄၁၉ ယောက် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ တကယ်အသေအပျောက်စာရင်းက ပိုမိုများပြားဖွယ်ရာရှိကြောင်း၊ ဂျပန်ပြည်သူ့အသံလွှင့်ဌာနမှ လူပေါင်း ၉၀၀ ကျော်သေဆုံးကြောင်း၊ Kyodo News Agency မှ သေဆုံးသူ ၁၈၀၀ ကျော်နိုင်ကြောင်းကြေငြာ။ လူပေါင်း ၂၁၅၀၀၀ ကို ပြည်နယ် ငါးခုအတွင်းရှိ ကယ်ဆယ်ရေးဌာန်ပေါင်း ၁၃၅၀ ခုတွင် ယာယီထားရှိကြောင်းသိရ။ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကယ်ဆယ်ပေးလျက် ရှိကြောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ အထောက်အပံ့များလည်း ပေးဝေလျက်ရှိကြောင်းသိရ။ အင်အားပြင်းထန်သည့်ငလျင်ကြောင့် မနေ့က နျူးကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက်ထပ် Nuclear reactor နှစ်ခုကလဲ အရည်ပျော်ကျဖွယ်ရာရှိနေသဖြင့် နျူကလီးယား […]
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ရင် ဒိဋ္ဌိလဲဖြစ်တယ်၊ ၀ိစိကိစ္ဆာလဲဖြစ်တယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှ ဒိဋ္ဌိ ၀ိစိကိစ္ဆာကွာတယ်။ ကွာပြီးမှ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ဖြစ်ပျက်အားထုတ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တအားမထုတ်ခင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင် အရင်လုပ်ထားရမယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှ ကိုယ့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်း ကိုယ့်ခန္ဓာ့ဖြစ်စဉ်ကိုသိမယ်။ နားမလည်ရင် မသိဘူး။ မသိတော့ ခန္ဓာအပေါ်မှာ သံသယ၀ိစိကိစ္ဆာတို့ ဒိဋ္ဌိတို့ ကပ်လာမယ်။ ကပ်လျက်သာ အားထုတ်မယ်ဆိုရင် အချီးအနှီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာ ကိုယ့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာ့ဖြစ်စဉ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာက အတိတ်ကအကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်ဆိုတာက ဒီအထဲမှာ ယောက်ျား မိန်းမမပါ၊ ရုပ်နာမ်တွေသာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အစဉ်တန်းပြီးတော့ ဖြစ်နေတာ။ ဘယ်သူ့ကြောင့် ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာရလဲဆိုတာကို သိရတဲ့အကြောင်းဟာ ဖြစ်ကြောင်းပါပဲ။ ဖြစ်စဉ်ဆိုတာက ကိုယ့်ခန္ဓာကြီးဟာ ယောက်ျားတွေ မိန်းမတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်၊ ၀ိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာလို့သိတော့ ဖြစ်စဉ်ကိုသိတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဖြစ်စဉ် […]
(11) Clauses: Short Forms
A: Short forms as answers 1. မေးခွန်းတွေ ဖြေတဲ့အခါ short form ကိုမကြာခဏသုံးတယ်။ Verb phrase ရဲ့ ပထမဆုံးစကားလုံးလေးကိုပဲ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြန်သုံးတယ်။ A: Can you come round tomorrow? B: Yes, I can/ No, I can’t. A: Have you seen Jack lately? B: Yes, I have/ No, I haven’t. A: Do you like living here? B: Yes, I do/ No, I don’t. ရံခါတွင် Modal verb ကို […]
ဂျပန်တွင် မနေ့က အင်အားအပြင်းထန်ဆုံးငလျှင်လှုပ်ခဲ့။ ၈.၉ magnitude ရှိ။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ များ အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းကယ်ဆယ်နေကြ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လက New Zealand တွင် Christian church ကို ပြိုပျက်သွားစေတဲ့ ငလျင်ထက် အဆပေါင်း ၈၀၀၀ လောက် ပိုပြင်းထန်။ လူပေါင်း (၃၀၀)လောက် သေပြီး (၅၀၀)လောက်ပျောက်ဆုံးနေ။ အသေအပျောက် (၁၀၀၀)ကျော်မည်ဟု Japan Media ကခန့်မှန်း။ ငလျင်ကြောင့် ရေလှိုင်းကြီးတွေ (၁၀)မီတာ၊ ပေ (၃၀)အထိ မြင့်တက်ကာ ဂျပန်ကမ်းခြေသို့ ရေလွှမ်းခဲ့။ အဆိုးဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိတဲ့မြို့က ဂျပန်ရဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Miyagi မြို့နယ်က Sendai မြို့ဖြစ်။ လူနေတစ်ရပ်ကွက်ထဲမှာပင် လူသေအလောင်း (၃၀၀)အထိ တွေ့ရ။ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကမ်းခြေမှာ ရထားလေးစင်းလဲ ပျောက်ဆုံနေ။ လူတစ်ရာတင်သွားတဲ့ ခရီးသည်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းလဲ ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်။ Miyagi […]
အ၀ိဇ္ဇာမှ ၀ိဇ္ဇာသို့ (မနေ့က အဆက်)
အ၀ိဇ္ဇာဟာ တော်တော်ဂြိုဟ်မွှေတဲ့တရားပဲ။ သူ့ကြောင့်ပဲ သမုဒယသစ္စာဖြစ်၊ သူ့ကြောင့်ပဲ ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတယ်။ ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ သမုဒယသစ္စာဖြစ်၊ သမုဒယသစ္စာဖြစ်ပြန်တော့ နောက်က ဒုက္ခသစ္စာလာ။ ဒါကြောင့် အ၀ိဇ္ဇာက ၀ိဇ္ဇာဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ အ၀ိဇ္ဇာဖြတ်ရလိမ့်မယ်။ အ၀ိဇ္ဇာဖြတ်တဲ့အလုပ်ဟာ ၀ိပဿနာအလုပ်ပဲ။ ရဟန်းတစ်ပါးက ဘရားရှင်ကိုမေးတယ်။ `ကထံ ဘန္တေ ဇာနတော ပဿတော အ၀ိဇ္ဇာ ပဟီယတိ ၀ိဇ္ဇာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ – ဘယ်လိုသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်လိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အ၀ိဇ္ဇာချုပ်ပြီး ၀ိဇ္ဇာဖြစ်ပါသလဲ´တဲ့။ ဒီတော့ ဖြေတော်မူလိုက်တာက `စက္ခုံစ အနိစ္စတော ဇာနတော ပဿတော အ၀ိဇ္ဇာ ပဟီယတိ ၀ိဇ္ဇာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ – စက္ခု မျက်စိကို ဖြစ်ပျက်လို့သိရင် ရှုရင် အ၀ိဇ္ဇာချုပ်ပြီး ၀ိဇ္ဇာ ဖြစ်တယ်´တဲ့။ `ရူပံ အနိစ္စတော ဇာနတော ပဿတော အ၀ိဇ္ဇာ ပဟီယတိ ၀ိဇ္ဇာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ […]
Two and three parts verbs
(9) Two and three part verbs Two part verbs အချို့ Verb တွေမှာ verb ရယ် particle ရယ်ဆိုပြီးတော့ နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် two part verbs လို့ခေါ်တယ်။ ဒီ verb တွေမှာ အောက်ပါအတိုင်း Pattern တော်တော်များများရှိတယ်။ Peter came in. (N+V+p) He took out his diary. (N+V+p+N) He gave the money back. (N+V+N+p) Phrasal Verbs အချို့ Transitive two part verbs တွေဟာ phrasal verbs တွေပါ။ သူတို့မှာ pattern နှစ်မျိုးရှိတယ်။ N+V+N+p She […]